16 akanakisa fps / tps (wekutanga- uye wechitatu-munhu shooter) mitambo yeiyo android, iphone uye ipad
Kuru Nhau & Ongororo 16 Yakanakisa FPS / TPS (yekutanga- uye yechitatu-munhu shooter) mitambo yeApple, iPhone uye iPad
16 Yakanakisa FPS / TPS (yekutanga- uye yechitatu-munhu shooter) mitambo yeApple, iPhone uye iPad
Shooter ndicho chingwa uye bota remitambo - ivo vanopa adrenaline-yakazara, ine simba chiito icho chinokurumidza kutiparadzanisa isu kubva kune chaicho uye chinoita kuti isu tifuridzire vamwe hutsi mukuita.
Nemafoni efoni achikura, ekuratidzwa kwepamusoro-soro uye machipisi akasimba, mamwe mamodheru akagadzirwa chaizvo kuti atambe mitambo, hapachisina nguva & yekutamba mitambo pafoni yako. Vagadziri havana & maapos vanga vasina kurara pane iwo maitiro uye vanopa runyararo rwemazita matsva ekunakidzwa.
Asi ndeapi akanakisa ekutanga- uye echitatu-munhu shooter mitambo yeApple, iPhone uye iPad? Nemamiriyoni emaapps aunosarudza kubva, zvingave zvakaoma kuti utore iwo akakodzera. Ndosaka isu takasarudza gumi nematanhatu epamusoro FPS uye TPS mitambo muApple App Store neGoogle Play Store.
Kana zvasvika pakutamba, nhare kana zvimwe, 2018 inogona kurondedzerwa zviri nyore nezwi rimwe chete: Fortnite. Epic & apos; s kurwa royale wechitatu-munhu shooter ikozvino inozivikanwa kwazvo, hapana & apos; hapana chero chinodiwa chekutsanangura mutambo. Zvakadaro, kana iwe ukangobuda kubva kuhibernation uye nzvimbo & maapos; hauna kuzvinzwa nezvazvo, heino maapuro; ndicho chirevo: unosvetuka uchibva mubhazi rinobhururuka, womira pachitsuwa wotanga kupwanya zvese zvaunoona. Kana iwe & apos; usiri mubishi kuparadza nharaunda yako, iwe & apos; urikuedza kuuraya chero munhu anodarika nzira yako. Chinangwa chako chiri nyore: iva wekupedzisira mupenyu. Oo, ehe, iwe unogona kuvaka fizikisi-inozvidza zvimiro zvakare, uchiwedzera kune nyonganiso yezvose.
Dhawunirodha pane Android : ios Mutengo: Mahara / IAP
PUBG ndeye Fortnite & apos; s vakura zvakanyanya, chaizvo-anotaridzika mukoma. Zvekare zvakare, iwe unozviwana iwe warasika pachitsuwa neboka revanhu vari kuedza kukubvisa. Kana iwe ukawana zvombo chaiko uye wofamba nenzira inogara ichidzikira yekutamba zvakanaka, iwe & apos; uchave nemukana wakanaka wekuhwina. Asi pakupera kwezuva, zvinokwana kuhunyanzvi hwako hwekuchengetedza iwe kuti urarame, uye isu tese tinoziva pane nhare kuti & apos; isiri diki feat. Iko & apos; s chikonzero vanhu vanofarira kutamba hondo royale mitambo - iyo yekuvhima-kana-kuve-inovhimwa nharaunda inowedzera iyo nhanho nyowani kune chiitiko chemitambo.
Shadowgun: Ngano ndeimwe yemitambo yakapfuma yeFPS inowanikwa pafoni. Iyo ine yakakodzera imwechete-mutambi mushandirapamwe, co-op mamishini, kupamba uyezve, PvP hondo. Iyo yemukati memutambo yakagadzirirwa seyetaundi uye inokupa iwe kunzwa kweiyo yakazara-yakazara desktop kana mutambo weconsoon. Pane zvakawanda zvezvinhu zvekuvhura uye iwe unogona kugadzirisa zvese kubva pahunhu hwako kuenda kuzvombo zvako. Zvese zvinouya mahara, asi neyakajairwa caveat - mune-mutambo kutenga. Zvakadaro, izvo iwe & apos; zvauri kuwana mahara zvinoshamisira uye zvechokwadi zvakakodzera kuti utarise kana iwe & apos; re pakutsvaga kweanopfura aine humwe hudzamu kwairi.
Yemazuva Ano Kurwisa 5: Kudzima magetsi
Chikamu cheshanu muMazuva Ano Kurwisa wekutanga-munhu shooter akateedzana anouya aine kunyange zvirinani mifananidzo kupfuura nakare, yakapfuma, inhau-inotungamirwa yega-mutambi modhi, pamwe nesarudzo inonakidza yevatambi vakawanda apo zvikwata zvevatambi zvinotarisana muhondo. Yemazuva Ano Kurwisa 5 inosvitsa makirasi mana evarwi ayo aunotora kubva: Kurwiswa, Heavy, Recon, kana Sniper. Kusarudza kirasi kunotsanangura nzira yauchatamba nayo, uye paunonyanya kufambira mberi mumutambo, ndipo paunowana zvakanyanya kukudziridza hunyanzvi hwako hwekirasi.
Iyo yega-mutambi modhi yakavandudza zvakanyanya kubvira Yemazuva Ano Kurwisa 4, ichikuendesa munzvimbo dzakasiyana, kubva kuVenice kuenda kuTokyo, asi zvakare hunyanzvi hwekugadzira mumutambo wemitambo - kubva kumamishinari kwaunochengetedza mumwe munhu, kumifananidzo ye cinematic uko gamba rako rinopenga stunts kuti vararame, vobva vapfura kubva kuherikoputa, uye nezvimwe zvakawanda. Iyo MC5 nyowani: kudzima magetsi matani emufaro! Mutambi wevazhinji, zvakadaro, ndipo zvinhu pazvinonyatso penga nehondo dzechikwata, dzepasirese uye dzekutamba squat, mabhodhi ekutungamira, uye zvese zviri pakati kuti ubate.
Chikonzero Chakafa 2
Semuchikamu chekutanga chemutambo, mu Dead Trigger 2 mutambi anofanira kurarama nenzira dzese dzinodiwa uye kudzivirira mafungu anouya embiri-ane nzara yenyama. Panguva ino, zvakadaro, iwe hausi kuzove wega mune izvi. Izvo & apos; s nekuti Dead Trigger 2 inotarisana nemitambo yemitambo yakawanda apo nyaya inokura mune chaiyo nguva kune vese vatori vechikamu. Uye kuedza kweumwe mutambi kunoverengwa.
Ehezve, izvo zvekumanikidza kuvandudzwa mubazi remifananidzo zviripo zvechokwadi. Mu Dead Trigger 2 iwe & apos; uchaona chaiyo-nguva yemvura yekuratidzira, inesimba zvinomera, uye yakagadziriswa ragdoll fizikisi. Iwo mazinga akaitwa akakurisa futi, zvichipa mutambi yakawanda rusununguko rwekuongorora uye dzimwe nzvimbo dzekuhwanda.Dhawunirodha pane Android : ios Mutengo: Mahara / IAP
Sezvo isu & maapos; tichitaura vanopfura zombie, Unkilled ndeimwe yeakanakisa matsva: ruzivo New York Guta rakakundwa neZombies uye iwe, Joe, pane basa rekumisa kupinda ne anti-zombie Wolfpack unit. Uine mamishini anopfuura mazana matatu, toni yevakasiyana zombie vavengi uye vakuru ve zombie vanosanganisira masheriff, butcher uye nezvimwe, pamwe nezvombo zvakasiyana siyana zvaunazvo (iyo pfuti, hongu, asi zvakare pfuti yepfuti uye zvimwe zvakawanda). Mutambo unotsigira MFG zvinodzora uye akawanda mapadhi mapadhi.
A Counter Strike-senge mutambo wemafoni nhare ine online mutambo wepamhepo, uyu wekutanga-munhu shooter ane hunyanzvi mutambo, mutambo wepamusoro-mhando, uye nekukurumidza-kuita chiito. Kune pfuti dzakawanda dzaungasarudza kubva, uye zvimwe zviri kuuya. Irwa seye counter-gandanga CT timu kana timu yemagandanga uye sima kana kudzikamisa bhomba. Tamba pamepu-yakasarudzika mepu uye uunze timu yako mukukunda.
Pfuti dzeBoom inonakidza katuni pamhepo PVP shooter, kwaunopinda muchiuto. Iri harisi uto renguva dzose, zvakadaro. Hapana anozokuudza zvekuita kana pekufura. Iwe unofanirwa kuita zvako sarudzo uye sarudza yako wega hondo. Batana nevamwe varwi, tora kugona kuuraya vanopikisa uye utonge nzvimbo yehondo. Ita blitz kurwisa, uchimwaya mutungamiriri munzira dzese, kana kuyedza kupfura muvengi wako kubva kure kure, uchitora nguva yako kunanga musoro chaiwo. Iyo inogara iri yako kufona.
ASI KUENDA. Nhaka
Noa Nhaka isci-fi shooter ine pedigree. Yakazviratidza pachayo seimwe yeakanakisa mumhando iyi pamusoro pemakore asi izvo & maapos hazvisi kumisa vanogadzira kubva mukuwedzera zvemukati nekupurazita mutambo wemitambo. Nemhando dzakasiyana dzemitambo, kusanganisira imwechete-mutambi iwo, uye zvakawanda zvingasarudzika zvejasi rako, mutambo uyu uchakuchengeta wakabatikana kwemaawa.
Hondo Yenyika Magamba: WW2 Shooter
Mhare dzehondo dzepasirese dzicharova tambo yekushuvira kune avo vanoyeuka mazuva eBattlefield: 1942. Mutambo uyu unonzwa zvakafanana uye negadziriro yezvombo, uye inotova nemotokari dzaungashandisa! Iwe unozogona kusarudza pakati pemashanu anowanikwa emamodhi modhi, mamwe acho akavhurwa kana iwe wasvika pane imwe nhanho. Kana iwe usingafarire kutevedzera yakatemerwa mitemo, iwe unogona kugara uchigadzira mutambo wetsika nemamiriro ekukunda uye mamwe marongero esarudzo yako uye unakirwe nekukurumidza kurwisa neshamwari dzako.
Inokosha Ops (C-Ops)
Critical Ops ndeye inokurumidza-aifamba maFPS ayo anozoedza ako mafungiro uye ehunyanzvi hunyanzvi. Shingairira kunakidzwa kwehondo yemazuvano yemagandanga apo iwe uchirwira chakakomba kuramwa kwekuita seanopokana negandanga kana chinangwa chekuparadza segandanga. Rwira kutonga pamwe chete neshamwari dzako, kana kuratidza nyika hunyanzvi hwako nekutungamira iyo yega mamaki.
Shadowgun: DeadZone mutambo wevazhinji-chete, uyo unobvumidza iwe kuti urwisane nevamwe vatambi vanobva pasirese. Mutambo unochengeta iwoyo wechitatu-munhu maonero, nekamera ichitevera kumashure kwehunhu hwako, uye unogona kunyange kushandisa iyo yekuvhara system yaive irimo mumutambo wekutanga, izvo zvinoita kuti zvinhu zvinyanye kunakidza. Iko kune modes: Deathmatch uye Zone Control. Yekutanga haidi & apos; haidi tsananguro, nepo yechipiri iri timu-yakavakirwa, aine mashoma ekudzora mapoinzi akapararira kutenderera mepu. Iwe nevamwe vaunotamba navo munofanira kugara padhuze nemapoinzi kuti muadzorore uye muwane mapoinzi.
Pixel Pfuti 3D
Kuwedzera zvimwe zvakasiyana maererano ne aesthetics ndiPixel Gun 3D. Iyo giraidhi dhizaini yemutambo uyu inoonekwa nekukurumidza sekufemerwa naMinecraft, asi chimiro chekupfura chemutambo uyu chakanakisa sechero chimwe pane urwu runyorwa. Kune akakwana emidhiya modhi ekugutsa chero FPS fan uye iyo hondo royale modhi (ehe saizvozvo pane imwe) zvinoshamisa kuti yakanyatsobuda kunze. Kusimudza hunhu hwako uye kuunganidza mu-mutambo mari inokutendera kuti uzarure zvombo zvine simba uye zvishongedzo zvehunyanzvi hwako. Izvo zvinhu zvekuzora zvinoshanda chinangwa, imwe neimwe ichiwedzera imwe bhenefiti panguva yekutamba.
Vakafa Mhedzisiro 2
Kana iwe & apos; uri fan yemusanganiswa pakati peSci-fi uye zvinotyisa, ipapo Dead Mhedzisiro 2 ndiwo mutambo wako. Hakuchina vamwe vatambi mumutambo uyu, iwe chete neboka revavengi vakaremara pane spacehip. Iyo yemhando yemhando inoshamisa uye iyo yekunzwa kwese yakafanana zvikuru neiyo yemutambo kubva kuDoom akateedzana. Nekudaro, Dead Mhedzisiro 2 inoita kuti iwe usarudze imwe yevatatu vatambi yekutamba se, yega yega iine yakasarudzika playstyle, ichiwedzera imwe replay kukosha kumutambo. Semazuva ese, iwe unosvika pakuvhura hunyanzvi uye nekumwe kuvandudzwa kuita kuti hupenyu hwako huve nyore. Mhedzisiro Yekufa 2 ndechimwe cheavo mazita anoita kuti iwe ufunge nezvekuti kureba kwekutamba nhare kwauya sei mumakore mashoma apfuura, kunyanya kana zvasvika pamitambo yemahara.
Kupinda muvakafa 2
Mukati mevakafa 2 ndiyo inotevera yeakakurumbira zombie shooter. Sezvaunogona kutarisira kuti nyaya inoitika mune yepashure-apocalyptic nyika uko maZombi ari makuru. Uine zvombo zvakawanda zvekukubatsira iwe kupatsanura semisoro yakawanda kubva pamiviri yavo inosanganidzana, mutambo uyu unoshamisa zvinomhanya-mhanya, nhanho yega yega inomhanya kweupenyu hwako. Iwo makumi matanhatu mazinga anofanirwa kukuchengetedza iwe kubatikana kwechinguvana, asi kupfuura izvo, ivo vanogadzira vari kuchengeta mutambo uri mutsva nezviitiko zvemwaka uye nematambudziko ezuva nezuva.
Blitz Brigade ndeye MMO wekutanga-munhu kupfura, kwaunosarudza kuve mumwe weanomwe ane hunyanzvi uye akakwana mabassass makirasi uye kubatana pamwe nevamwe vatambi kupwanya vavengi vako muvhu.
samsung galaxy s21 ultrajaja
chiitiko cheGoogle chiri riini
kana mamiriro ari muShell script
Yakanakisa yekupona zombie mitambo yeApple uye iOS
Minecraft Pocket Edition inoratidzira hombe yekuvandudza - mijenya yezvinyorwa zvitsva uye maficha mune tow
Yakanakisa SD kadhi muverengi kune yako Android foni
Apple iPhone 11 Pro uye Pro Max Ongororo
Super Mario Run: mamirioni makumi mana kurodha pasi, kwete mazhinji akashandurwa kutenga. Nintendo anotsanangura kuti nei yakafunga pamadhora gumi emadhora
iOS 14 'Headphone Safety' inoratidza Apple zvakadaro haina hanya nesarudzo yevatengi
Verenga Zvivakwa Faira muJava Iine ResourceBundle
iPhone 11 (2019): zuva rekuburitsa, mutengo, nhau uye kubuda
T-Mobile inopwanya Verizon uye AT & T mune mumwezve mushumo wevatengi
Verizon inotapira akanakisa ayo ekubhadharisa madhiri neyakawedzera online-chete chirongwa chekudzora